Badhasaabka gobolka Awdal iyo Maayerka Borama Ma Waxa ay ku heshiiyeen hantidii qaranka wakhtiga kala guurka Diirada Lughaya.com | Lughaya.Com
Badhasaabka gobolka Awdal iyo Maayerka Borama Ma Waxa ay ku heshiiyeen hantidii qaranka wakhtiga kala guurka Diirada Lughaya.com
Added by Adal on December 2, 2017.
Ilowareedyo aanu ka helayno xarumaha maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa tibaaxaya in gaadhigii badhasaabka si sharcidaro ah wakhtiga kalaguurka ay u kala iibsadeen badhasaabka gobolka Awdal iyo maayerka Borama. Wararka ayaa sheegaya in baabuurkan oo uu soo celiyay badhasaabkiii hore ee gobolka Awdal ee Ramaax . Baabuurkan ayaa qadarka lacagta ah ee lagaga iibiyay Maayerka Borama uu dhanyahay 13000 Doolaar. Manacada ilaahada in lacagtaasi uu maayerka Borama ku iibsaday gaadhigani ay tahay tii dawlada hoose ee Borama iyo in uu sifihii sharciga ahaa u maray iibsashada baabuurkan.
Waxa se iswaydiin leh mxaa masuuliyiintan ku kalifay in ay wakhtiga kala guurka ay ugu soo beegeen iibinta iyo iibsashada gaarigan ?. Arintan ayaa dadka qaar u macnaysanayaan in labada masuul ba ay is ogyihiin kalsooni laaanta xukuumada Cusubi ka qabaan isla markaana ay isleeyihiin ka faaiidaysta kolay la inima dhaafayee.
Tan iyo markii uu bilaabmay ololaha doorashooyinka Somaliland waxa isa soo tarayay hadalhaynta dadwaynaha reer Borama ee la xishiidha in Badhasaabka cusub ee gobolka Awdal Buraale Gaaxnuug iyo maayerka Borama ay ka mid ahaayeen xilsidayaasha xukuumada Kulmiye ee lagu thunsanyahay in ay gacansaar la leeyihiin xisbiga mucaaradka ahaa ee doorashada lagaga adkaaday ee WADANI.
Arimahaasi oo awalkii hore dadku ay ku sababaynayeen qaabkii ololaha xisbiga Kulmiye ee doorashada ay uga qayb qaadanayeen oo ahaa mid aad u liitay, taasi oo oo dhalisay in laga shakiyo.
Dareenkaasi bulshada ee labadan masuul laga qabay waxa uu soo ifbaxay markii ay doorashadu dhamaatay ee la ogaaday natiijooyinkii hordhaca ahaa ee ay xisbiyadu ka kala heleen deegaanada gobolka Awdal. Tusaale ahaan maayerka Borama deegaanka uu ka soo jeeday ee Quljeed waxa ay ahayd meelihii sida wayn loogaga codeeyay xisbiga WADANI. Haseyeeshee badhasaabka Awdal oo isagu ka soo jeeda Beesha Arab ee Hargaysa waxa kaliya ee lagu ogaaday waxa ay ahayd iibkan qarsoodiga ah ee hantidii gobolka uu xaraashay.
Sikastaba ha ahaatee waxa aan la soodaalin Karin talaabada ay madaxweynaha cusub iyo kuxigeenkiisu ay ka qaadan doonaan arintan